Fitaovana fanosorana, fanosorana milina - Blog
BLOG - Fitaovana fanosorana, Fisorohana milina
Blog[email voaaro]2017-07-01T10: 53: 56 + 00: 00
Endri-javatra 8 samy hafa eo amin'ny menaka sy ny menaka
Ny mpanjifa sasany dia sahiran-tsaina amin'ny toetran'ny menaka fanosotra amin'ny menaka sy ny menaka avy amin'ny tranokalanay, ankehitriny dia mitanisa endri-javatra 8 samihafa eo amin'ny menaka sy ny menaka eto ambany izahay: 1. Adhesion Feature Between Oil [...]
Inona no atao hoe Rafitra fanosorana andalana tokana ( Rafitra fanosorana mandroso)?
Ny rafitra lubrication andalana tokana dia antsoina koa hoe rafitra fanamafisam-peo Progressive, izay karazana fahamendrehana avo lenta, fanaraha-maso mandeha ho azy, fitaovana fanosotra mandroso sy tsara indrindra, dia manana tombony manaraka ireto: 1. Ny rafitra fanasan-damba roa andalana [...]
Inona no atao hoe Rafitra fanosorana andalana roa ( Rafitra fanosotra andalana roa)?
Misy karazany 4 ny rafitra fanasokajiana tsipika roa araka ny nampidirina etsy ambany: Manual Terminal Dual Line Lubrication System: Ny menaka aterina sy fehezin'ny valva fanaraha-maso sy ny tsindry ateraky ny paompy fanosorana. [...]
Mpanome lubricant – Valve mpizara fanosorana
Distributors Lubricantion Ho an'ny Lubrication Manavao ny tsipika vokatray izahay mba hanarahana akaiky ny tsena, azafady mba diniho ny tranokalanay raha mila entana bebe kokoa. Ny kojakojan'ny milina dia napetraka tsara na dia efa ela niasana aza, [...]
Manome valiny rehetra azo atao ho an'ny mpanjifany ireo orinasa mpamokatra lozisialy afovoany ireo mba ho afa-po ny filana sy ny fepetra takiana. Ny mpanamboatra fiara sasany dia manolotra karazana paompy menaka sy paompy rotatory vokarina amin'ny fampiasana [...]
Ahoana ny fitantanana sy fanatsarana ny lisitry ny fitaovanao
Ny Noria Reliability Solutions no tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana sy ny fametrahana programa fitaovana fanasan-damba eran-tany ao anatin'ny kaontinanta Amerika Avaratra sy any an-dafin'ny kontinanta. Ny lisitry ny fitaovana omen'ny mpanjifa tsirairay dia ampiasaina amin'ny famolavolana [...]
Ahoana no hanavaozana ny drafitra fanosoranao, fomba enina tsotra ihany
Eo amin'ny tontolon'ny fandraharahana amin'izao fotoana izao izay itadiavan'ny mpampiasa vola ny fiverenana tsara indrindra amin'ny fampiasam-bolany, ny drafitry ny fanosorana amin'ny fitaovana injeniera dia tsy voakarakara tsara. Raha atao araka ny tokony ho izy, dia hampihena ny fahaverezanao mandritra ny fotoana maharitra ny fitaovana fanosoranao [...]
Ahoana ny fomba hifidianana ny mpamatsy solika tsara?
Amin'ny maha-indostrialy anao, inona no toetra tadiavinao rehefa mikaroka mpamatsy menaka mety indrindra ianao raha manana orinasa manana turbine lehibe, compressor centrifugal, boaty, rafitra hydraulic, rafitra fanosotra? fanosorana [...]
Torohevitra momba ny fanaraha-maso Varnish
Misedra olana amin'ny fahapotehan'ny vokatra oxidation amin'ny menaka turbine amin'ny hafanana ambany ve ianao? Mpanjifa maro no nifandray taminay tamin'ny olana mitovy amin'izany izay levona ao anatin'ny mari-pana miasa (izany hoe 60 - 80 degre. [...]
Akora manta menaka
Ny menaka fanosorana dia iray ihany amin'ireo akora manta, na singa maro, izay azo avy amin'ny petrole manta, izay mipoitra avy amin'ny menaka mba ho loko mavo mifangaro mainty, [...]
Fitsipika fiasan'ny rafitra fanosorana andalana roa
Ny valva fandaharana fanosotra kambana matetika dia ahitana: paompy fanosotra fanangonam-bokatra ZPU (na paompy namboarina), valva fivoahana, valva fizarana fizarana roa, valva fizarazarana roa, fanerena terminal mifamadika gadget efatra. Ny menaka ao amin'ny paompy fanosotra dia [...]
Karazana fanosotra amin'ny rafitra fanosorana andalana roa
Misy fomba roa karazana fanosorana ho an'ny rafitra fanosorana andalana roa: Karazana fanosorana amin'ny Rafitra fanosorana an-tsipika roa sy fitaovana: 1. Fampandehanana amin'ny tanana Karazana hery roa ny rafitra fanosotra: tanana tanana [...]
Aiza no hampiasana rafitra fanosorana an-tariby roa?
Ny rafitra grease roa-tsipika dia azo ampiasaina araka ny fepetra fiasana etsy ambany. Aiza no hampiasana rafitra fanosorana roa andalana: 1. Misy teboka fanosotra bebe kokoa ary ireo teboka fanosotra mifandraika dia mipetraka amin'ny toerana miparitaka, indrindra any [...]
Dual Line Grease System Tombony
Tombontsoa amin'ny rafitra grease tsipika roa: Ny teknikan'ny valva fanasarahana menaka tsipika roa dia maniry ny hampitombo ny adin-tsaina dia mamela ny fampiasana sodina fanosotra kely kokoa, mampihena ny vidin'ny loharanon-tsolika sy ny fametrahana. [...]
Inona no atao hoe Valve Divider?
Inona no atao hoe Valve Divider? Ny valves divider dia ampiasaina amin'ny toe-javatra maro samihafa. Amin'ny ankapobeny, izy ireo dia ampiasaina amin'ny karazan-javamaniry isan-karazany izay ilàna izany lehibe izany [...]